Ku Dhowaad 15 Kamid ah Gawaarida Dagaalka oo Garoowe Gudaha u Galay iyo Xarumihii Dowladda oo Laga Digey In..
Puntlandnews.net (Garoowe)-Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno caawa magaalada Garoowe ayaa sheegaya in siweyn loo adkeeyey ammaanka aqalka madaxtooyada, xarumaha dowladda iyo dhammaan.qaybaha kala duwan ee magaalada Garoowe.
Laamaha ammaanka Puntland gaar ahaan ciidamada PMPF, PSF iyo kuwa booliska ayaa lagu arkayaa weli goobaha qaar si ay u sugaan ammaanka, waxaana habeen walba howlgallada magaalada ka socda lagu arkaa ciidamo baaraya gaadiidka kala duwan iyo roondayn ka socota hareeraha magaalada.
Saraakiil aan xiriir la samaynay ayaa noo sheegay in howlgalladaan looga golleeyey adkaynta ammaanka guud ee caasimadda iyo in laga hortago tallaabo kasta oo looga faa’iidaysan karo xilliga kala guurka ee Puntland.
Howlgallada waxaa sidoo kale lagu beegsanayaa cidkasta oo isku dayda inay samayso boob ama ku tagri fal hanti dowladeed maadaama uu dalku kujiro kala wareegga labada xukuumadood isla markaana ay jiri karaan shaqsiyaad isku deyaya inay hantida dowladda ka faa’iidaystaan dushana u saaraan xukuumadda xafiiska wareejin doonta.
Kadib kulan ka dhacay aqalka madaxtooyada Puntland una dhexeeyey madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa, madaxweynihii hore iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiirada ayaa waxaa lagu go’aamiyey in shaqadii dalka sideedii ku sii socoto.